၁။ လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရ ကုမ္ပဏီ(သို့) Operator မှ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊ ဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာနသို့ လိပ်မူ၍ ကုမ္ပဏီအကြီးအကဲ(သို့မဟုတ်) အကြီးအကဲကိုယ်စား လက်မှတ်ရေးထိုး လျှောက်ထားရန်၊
၂။ (က) ဖိုင်ဘာလမ်းကြောင်း၏ Starting point & End point ( Latitude & Longitude )
ပါရှိသော လမ်းကြောင်း တစ်ခုလုံးပြ မြေပုံများအား Google Map ဖြင့်တင်ပြရန်၊
(ခ) လမ်းကြောင်း အပိုင်းတစ်ခုချင်းစီ ပါဝင်သော အကျဉ်းချုပ်ဇယား၊
Fiber Route Length (Km)
(ဂ) လမ်းကြောင်း တစ်ခုချင်းစီ၏လမ်းကြောင်းပြ မြေပုံများအား Google Map ဖြင့်တင်ပြရန်၊
၃။ Technical & Survey Report Data (Over Head , Under Ground , Duct , Direct Buried , Numbers of Fiber Cores , Numbers of poles , etc….) တင်ပြရန်၊
၄။ Fiber Cable များမှ အခြားသုံးစွဲသူများသို့ မျှဝေငှားရမ်းသုံးစွဲခွင့်ပြုရန်နှင့် ငှားရမ်းခ စျေးနှုန်း ကိုလည်း ဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှ ညှိနှိုင်းသတ်မှတ်ပေးမည့် စျေးနှုန်း ဘောင် အတွင်းမှ ဆောင်ရွက်ရန်သဘောတူညီချက် တင်ပြရန်၊
၄။ Fiber Cable များမှ အခြားသုံးစွဲသူများသို့ မျှဝေငှားရမ်းသုံးစွဲခွင့်ပြုရန်နှင့် ငှားရမ်းခ စျေးနှုန်း ကိုလည်း ဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှ ညှိနှိုင်းသတ်မှတ်ပေးမည့် စျေးနှုန်းဘောင် အတွင်းမှ ဆောင်ရွက်ရန်သဘောတူညီချက် တင်ပြရန်၊
၅။ Metro Fiber ချခင်းပါက သက်ဆိုင်ရာ Right of Way ပိုင်ဆိုင်သည့် အဖွဲ့အစည်း၊ ဌာန ဆိုင်ရာ များ၏ ထောက်ခံခွင့်ပြုချက် တင်ပြရန်၊
၆။ NS လိုင်စင် နှင့် AS လိုင်စင်ရ ကုမ္ပဏီများသို့ Fiber ငှားရမ်း၍ Metro FTTH ဆောင်ရွက် ပေးမည်ဆိုပါက အဆိုပါ NS နှင့် AS လိုင်စင်ရ ကုမ္ပဏီများသို့ Fiber Core မည်မျှငှားရမ်းမည်၊ Km မည်မျှငှားရမ်းမည် နှင့် ၎င်းတို့နှင့် ချုပ်ဆိုထားသည့် Agreement များပူးတွဲတင်ပြပေးရန်၊
၇။ FTTH ဖိုင်ဘာ သွယ်တန်းမည်ဆိုပါက ဝန်ဆောင်မှုပေးမည့် မြို့နယ် တစ်ခုချင်းအလိုက် Detail Design Drawing များ ၊ Outside Plan များ၊ သွယ်တန်းမည့် Household အရေအတွက်များ တင်ပြရန်၊
Cross Border ဖိုင်ဘာ
၂။ Fiber Starting point & End point (Joining point) ( Latitude & Longitude ) ပါရှိသော လမ်းကြောင်းအကွာအဝေး (Km) နှင့် လမ်းကြောင်းပြမြေပုံအား Google Map ဖြင့် တင်ပြရန်၊
၃။ Technical & Survey Report Data (Over Head , Under Ground , Duct , Direct Buried , Numbers of Fiber Cores , Numbers of post , etc….) တင်ပြရန်၊
၅။ နယ်စပ်ဖြတ်ကျော် ဖိုင်ဘာဆက်ကြောင်း တည်ဆောက်လိုပါက တဖက်နိုင်ငံ၏ Partner အမည် နှင့် ချုပ်ဆိုထားသည့် Agreement များပူးတွဲဖော်ပြရန်၊